Best U35 Tl84 U30 Ruvara Unofanidza Mwenje Mugadziri uye Fekitori | Anan
U35 Tl84 U30 Ruvara Unofanidza Chiedza
Kune akawanda macircuit emwenje ye fluorescent, ayo anoda zvigadzirwa zvekubatsira. Naizvozvo, inofanirwa kushandiswa pamwe chete neanoshandura anoenderana uye ma capacitors kuona kuti marambi anotanga kune yakakodzera simba.
Anan kana OEM
Inzwa Zvinotaurwa Voltage (V):
Lamp Luminous kunyatsoshanda (lm / w):
Lighting mhinduro sevhisi:
Kuvhenekesa uye dhizaini dhizaini
ruvara mechi mechi
Rudzi rwe Base: T-chubhu
Inoshandiswa zvakanyanya pakuvhenekera kwemukati, hotera, resitorendi, mashopu, mwenje webhizinesi, mwenje wemba, nezvimwe.
1.Suka mwenje ne ethanol usati waiswa, wobva wabata chubhu ine magurovhosi akachena.
2.Rambi rakaiswa panzvimbo, bata mubati wemwenje neruoko woisa pamubati kwechinguva kuti uone kana mwenje wakasununguka nyika, kuitira kuti pasave nekutsemuka kana uchiisa mwenje.
3. Dzimwe nguva apo mwenje unobviswa uye uchicherechedzwa. Kune mamaki emaoko pamadziro erambi uye bvisa. Izvi zvinodaro nekuti kumisikidzwa kwerambi risina magirovhusi pamaoko edikita uye tsvina yakanamatira pombi kuburikidza nekupisa kwakanyanya kwekabhoni sintering pagirazi rekristaro. Kana paine mhepo yakakomba inodonha munzvimbo ino tarisa mwenje.
4 .Magetsi anofanirwa kudzimwa kana uchiisa kana kutsiva mwenje nekuchenesa chifukidziro chemwenje, zvikasadaro inozoshamiswa nemagetsi. Chengetedza rusvingo rwepaipi rwakachena, kunyanya bvisa girisi uye guruva.
5.Nekuti zvinhu izvi zvinopinda mukati mehubhu iri pamusoro peye yepamusoro tembiricha pombi pamadziro.
Pashure: D50 D65 D75 Ruvara Unofanidza Chiedza
Zvadaro: OEM / ODM Inotengesa China Yakanaka Kutengesa Yakanyanya Kupenya Fluorescent Tube Inoisa T8 Tube
12v yakatungamira fluorescent chubhu
fluorescent mwenje chubhu
fluorescent machubhu 40
machisi ane mavara
D65 Ruvara Kufananidza Chiedza D65 Chiedza Tl84 Mwenje
D50 D65 D75 Ruvara Unofanidza Chiedza
Inonyanya Kugadzirirwa T8 / T12 Ruvara Match Chiedza
Kupisa Kutengesa D65 Mwenje Mabumba
Chitsva Chigadzirwa Chemhando yepamusoro 6500K D65 Mwenje Mabumba
Kupisa kutengesa LED Tube T8 120CM G13 Cri 90